एक्टशाला @ पोखरा – Mahesh Shrestha
एक्टशाला @ पोखरा
शिव शर्मा/आश्विन २ –
अभिनय सिक्ने हैन त ? यतिबेला पोखरेली तन्नेरीबीच यस्तै खासखुस हुने गरेको छ । आफ्नो ड्रिम पूरा गर्न युवाहरू एक्टिङ सिक्न लालयित देखिएका छन् । यस्तोमा युवाहरू मिलेर अभिनयको पाठशाला संचालनमा ल्याएका छन् । फिर्के पोखराकी रिता केसी पनि अभिनयमा निखारता ल्याउन अभिनयमा लुप्त भएकी छिन् । फिर्के पोखराकी २० वर्षीया उनी मोडल पनि हुन ।
एक्टिङ सिक्न राजधानी नै पुग्नु पर्ने बाध्यतालाई सहज तुल्याउन युवाहरू जागरुक भएका हुन । र, प्लेटर्फम पनि बनाएका छन् । आफनै ठाउँमा एक्टशाला खुलेपछि युवाहरू उत्साहित छन् । अनुप बराल, प्रकाश घिमिरे जस्ता हस्तीले देखाएको बाटोलाई आत्मसाथ गर्दै अभिनयको यात्रा फराकिलो बन्दैछ । यसको जिम्मेवारी तन्नेरी पुस्ताले लिएको छ ।
अभिनय सिक्ने चाहनेको एक्टशालातर्फ आकर्षण बढिरहेको छ । राजधानीमा रंगकर्म गरेका महेश श्रेष्ठ र अम्बर सुवेदीले तन्नेरीलाई एक्टिङमा आकषिर्त गर्न एक्टशालाको अवधारणा ल्याएका हुन । राजधानी पछि नाटक तथा कलाको गतिविधी पोखरामा बढी भएकाले पनि उनीहरूले तन्नेरीको रूचिलाई आत्मसात् गरेकेा बताए । महेश श्रेष्ठ एक दशकदेखि रंगमञ्च र फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय युवा हुन ।
रंगकर्मी वीरेन्द्र हमालसँग अभिनय कला सिकेका उनले एक दर्जन नाटक र दुई दर्जन सडक नाटकमा पनि अभिनय गरेका छन् । पोखरा फिल्म सोसाइटीमा समेत आवद्ध श्रेष्ठले अभिनय सिकाउने यो डबली तयार गरेका हुन । उनले भने, ‘एक्टशालाले सबैलाई एकत्रित पारेर नियमित अभिनयमा लगाएर खारिदै जाने अवसर जुटाउनु हो ।’
उनीसँगै अम्बर सुवेदीले यतिबेला प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । सुवेदी पनि रंगकर्मि अनुप बरालसँग सिकेर र केही नाटक खेलेर आफनै थलोमा फर्केर आफू सिकेको ज्ञान बाड्न तम्सिएका हुन । नेपथ्य र नाइकेमा हिरोको रोल गरिसकेका रेम बिक पनि एक्टशालामा दिनहुँ भेटिने गरेका छन् । ‘एक्टिङ सिक्न चाहने नयाँलाई यसले थप तिखारिन मदत गर्नेछ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समयमा पोखरामा सिनेमाको गतिविधि अधिक रूपमा बढेको छ । यहीबाट समेत ठूलो पर्दाको सिनेमा बन्न थालेपछि अभिनयमा आउन चाहने बढिरहेका छन् । राजधानीबाट सुटिङका लागि आउने फिल्म मेकरले समेत यहाँका कलाकार खोज्ने गर्छन् । त्यसो त पोखरामा कलाकारको पनि कुनै कमी छैन । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर खोलिएको हो, एक्टशाला ।
प्रकाशित मिति: २०७१ आश्विन ३ ११:४६
October 21, 2014 by Bhaju Mahesh	Acting, Acting Training, Acting Training at Pokhara, Acting Workshop at Pokhara, Actshala, Bhajumahesh, Drama, Excercise, Mahesh, Mahesh Shrestha, Pokhara, Theatre, Theatre in Pokhara
आउटसाइडरको डायरी– १
आउटसाइडरको डायरी – २
Mahesh in Media
टोकन नं १४०९
Bhaju Mahesh on हिरोनी को, रेखा थापा हो ?
Sachin Pradhan on हिरोनी को, रेखा थापा हो ?